Linelọ ọrụ na-enweghị nke kristal - China Na-enweghị Nkịtị Ndị Na-emepụta Ihe, Ndị Na-eweta Ihe
Kristal ZGP nwere nnukwu ọnụọgụ na-enweghị atụ (d36 = 75pm / V), infrared sara mbara
nghọta dịgasị (0.75-12μm), nrụpụta dị elu (0.35W / (cm · K)), nnukwu laser
mmebi ọnụ ụzọ (2-5J / cm2) na ngwongwo na-arụ ọrụ nke ọma, a na-akpọ kristal ZnGeP2 eze nke kristal na-ahụ anya na-enweghị atụ ma bụrụkwa mgbanwe kachasị mma.
ihe maka ike di elu, onodu infrared laser.
AGG uzo site na 0.50 ruo 13.2 µm. Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ọnụọgụ ya na-enweghị atụ bụ nke kachasị dị ala n'etiti kristal ndị a kpọtụrụ aha infrared, a na-eji usoro ntụgharị ọhụụ dị mkpirikpi dị elu na 550 nm mee ihe na OPOs nke Nd: YAG laser; na ọtụtụ dị iche iche ugboro agwakọta nwere na diode, Ti: Sapphire, Nd: YAG na Iye dai lasers ekpuchi 3-12 µm nso; na usoro mgbochi infrared kpọmkwem, yana maka SHG nke CO2 laser. Thin AgGaS2 (AGS) efere kristal na-ewu ewu maka ọgbọ ultrashort pulse n'etiti etiti IR site na ọgbọ dị iche iche na-eji ọrụ ntụgharị NIR.
AGSe Kristal AgGaSe2 nwere akụkụ band na 0.73 na 18 µm. Transmissiondị nnyefe ya bara uru (0.9-16 µm) na ikike zuru oke na-enye ikike maka ngwa OPO mgbe a na-agbapụta ya site na laser dị iche iche. Enwetala ụda n'ime 2.5-12 µm mgbe ị na-agbapụta site na Ho: YLF laser na 2.05 µm; yana usoro na-enweghị oke nkwekọ (NCPM) na-arụ ọrụ n'ime 1.9-5.5 µm mgbe ị na-agbapụta na 1.4-1.55 µm. Egosiputara AgGaSe2 (AgGaSe2) ka ọ bụrụ kristal ugboro abụọ na-arụ ọrụ nke ọma maka ikuku radieshon CO2 laser.
Nkume AgGaGeS4 bụ otu n'ime kristal siri ike na ikike nwere ike dị egwu n'etiti kristal na-enweghị atụ na-arịwanye elu. Ọ na-eketa ọnụọgụ ngwa anya na-enweghị atụ (d31 = 15pm / V), oke nnyefe dịgasị iche (0.5-11.5um) na ọnụọgụ mmịkọ dị ala (0.05cm-1 na 1064nm).
AgGaGe5Se12 bụ kristal na-atụ anya ọhụụ ọhụụ na-atụgharị anya maka ịgbanwere 1um siri ike lasers n'ime ụdị infrared (2-12mum) dị n'etiti.
Igwe kristal dị elu nke BGSe (BaGa4Se7) bụ selenide analogue nke ngwongwo chalcogenide BaGa4S7, bụ nke a chọpụtara usoro ihe omimi nke orthorhombic na 1983 ma kọọrọ mmetụta IR NLO na 2009, bụ kristal IR NLO mepụtara ọhụrụ. Enwetara ya site na usoro Bridgman – Stockbarger. Igwe kristal a na-ekpughere mgbasa ozi dị elu karịa ọtụtụ 0.47-18 μm, belụsọ maka elu absorption na gburugburu 15 μm.